Kunze kusvimha misodzi! 15 vanonyanya kushamwaridzana uye vanopisa gay
Gore roga roga vanhu vanonyanyisa kuratidza zvepabonde, saka vazhinji vanopemberera vanoita pachena. Gadzirira kupukuta misodzi, nokuti varume ava havasipo.
Mamiriyoni evasikana pasi pose vari kushamisika kuti izvi zvinogona kuitika sei, uye nei chimiro chakasarudza zvakadaro kuti vakomana vakanaka uye vanopisa "vanotamba rimwe boka". Zvakanaka, chii chaunofanira kuita, inongoramba ichipukuta misodzi uye ichiyananisa nekusaruramisira kwakadaro.
Pasi penziyo dzake dzeLatin America, vakadzi vezera rakasiyana vakange vachipenya uye ruzivo rwakarongwa naRicky murume ane hurochani rwakashamiswa chaizvo. Muimbi kwenguva yakareba akavanza mararamiro ake, asi muna 2010 akaita hunyengeri-kunze. Iye zvino ari muukama hurefu uye anounza mapatya maviri akaberekwa kubva kune amai vanozvipira.
Inzwi ranyoro romunhu uyu rakakwanisa kuchenesa ice iri mumoyo wemukadzi chero upi zvake, asi izvi ndizvo zvose zvinogona kuverenga kurara kwakanaka, nokuti mushure mekunyadzisa kwakabatana nekushungurudzika, akabvuma kusatendeseka kwake. Muimbi haasisipo, asi nziyo dzake vamwe vasikana iye zvino vachanzwa zvakasiyana.
Vafudzi vomuimbi wacho vakangoerekana vawira murudo nemeso ake ebhuruu uye vakarota nekutsvoda kwake. Nguva pfupi paiva netariro, sezvo Matt akabvuma muna 2012 kuti ane murume nevana vatatu. Vafudzi vasina zuva rimwe vachichera mumutsiro, asi chii chavanofanira kuita.
Akanaka, ane ruzivo mufashoni, akafuma kwazvo uye, zvinosuruvarisa, haawaniki. Ndicho chikonzero nei zvisina kunaka? Achiri kushanda semuenzaniso, Tom aive akakurumbira nevakadzi, asi panguva imwe chete, hapana mudzimai mumwe chete aigona kuronga iye, sezvaaifarira varume. Iye zvino Ford yakaroorwa nemukuru mukuru we magazini "Vogue Men" Richard Buckley.
Meso ebhuruu uye kunyemwerera kwemuiti wevatambi vaiwanzogara vaenzi vezviroto zvevakadzi vane mamiriyoni, uye iyo yakaodza mwoyo ivo pavakabvuma kuti haana kunzwa shungu kune vakomana nevasikana.
Vakanaka, avo vakapinda muhutano hwakawanda hwevechidiki, haafaniri kuvhara hupenyu hwake hwega uye havana kuita cum-out, asi mumwe wevamwe vaaishanda akafumura chakavanzika chekuda kwake zvepabonde.
Muchiitiko ichi, hazvisi zvinhu zvose zvakarashika, sezvo mudiki wechidiki anotaura kuti anoda vanhurume nevakadzi, saka, zvichida, humwe runako huchiri kukwanisa kumukwidza kuruboshwe.
Imwe yevarume vakakurumbira 'mapoka e'NeSync yakaendesa mapoka evanhu mapenzi uye munhu wose akanga akagadzirira kuita zvizhinji kungobata chifananidzo chacho. Kune vakawanda, ruzivo pamusoro pezvido zvepabonde zveumwe wevanhu vaLolist - Lance Bass, uyo muna 2016 akaroora mukomana wake, akashamisika.
Vakadzi vakawanda vakarota kuti vari mumaoko emoto uyu unopisa, uyo akave akakurumbira ne "series horror story", asi mutambi wacho akasarudza kusachengeta fungo kwenguva yakareba uye akabvuma kuti mhandara isina kufanira haina kumubata kwaari zvachose.
Mutambi wemhanzi yakakurumbira yeTV The Big Bang Theory haana kumbovanza maitiro ake, asi akazozivikanwa nehurumende muna 2012. Muna 2017, akaroora muchato nemurume waakasangana naye kwemakore 14.
11. Ruka Evans
Imwe yemampires yakakurumbira kubva mumabhidhiyo "Dracula" yakakurumidza kuzivikanwa nepamusoro pekutenda kwake. Kune vose, kune makuru makuru - makore mashomanana apfuura, mutambi wacho akabatwa mumutsva nemukadzi. Zvichida akakwanisa kumuratidza kuti maoko evakadzi ava akanyorova uye ane shungu. Tiri kumirira kutongwa kwepamutemo.
Moriarty yakanakisisa yezvinyorwa zvose zviripo zve "Sherlock". Zvinofadza, akabvuma mune zvaanofunga, nenzira. Akabvunzwa kuti aigona sei kunyatsobudisa mutauro weRussia, kwaakazopindura kuti akanga achiita izvi, achitarisa kubvunzurudzwa kwemukuru weRussia, asi apo Putin akaudza mutemo wevanopesana nevarume, nekuda kwekutenda kwake Andrew akarega kuzviita.
Munyori uyu anozivikanwa nemutauro wake wakaenzana nemimhanzi uye miromo yakawanda, kutambirwa kwevakadzi vasingagoni kunzwa, sezvo muna 2012 pa blog yake Frank akareurura kuti kwekutanga akada murume nemurume achiri muduku uye manzwiro ake akanga asina tariro. Aa, saka ane rudo uye haakwanisi.
Vanaamai vakawanda vanorota pamusoro pomwanakomana wemwana uyu, nokuti mukomana haasi akanaka chete, asiwo ane tarenda. Zvinosuruvarisa, asi sevechiri kuyaruka, akareurura kuvabereki vake kuti aifarira varume. Nenzira, munyaya dzakanzi "Chorus" Chris akatamba ari oga.
Kunyemwerera kunoyevedza uye chishamiso chinoshamisa chemaziso chakaita kuti vazhinji vevakadzi vasvike. Nyeredzi yehurukuro dzakanzi "Zvandakaita Naamai Vako" yakaita chirevo chinoshamisa muna 2006 mu People magazine. Mushure memubvumirano wemutemo pamusoro pehutano hwekuroorana muNew York, akaroora muchato neaanoda, uye mushure mechinguva vakazova vabereki vemapatya maviri kubva kumamai vanozvipira.
Chikoro kunze kune avo vakave vakakurumbira uye vanobudirira
11 nyeredzi dzevakadzi, pamusoro pekuunganazve uko nyika yose inotota
10 rufu-mubhedha unozivikanwa mumasangano evanhu
10 nyeredzi, pamusoro pemishonga yekushandisa zvinodhaka izvo nyika yose yakadzidza
10 miitiro yakaipa zvikuru munhoroondo ye "Eurovision"
Emmanuelle Macron uye Brigitte Tronier: anoshamisa rudo nhau yemukuru mutsva weFrance
Jade nyuchi: 16 nyeredzi dzinochengetedza peni imwe neimwe
15 mavambo ekutanga maunoziva zvifananidzo zvenyu
Kufungisisa, mvura, munyengetero uye pepanhau: mapepa gumi nemangwanani akanaka kubva kune vanozivikanwa
Nicolas Cage muKazakhstan - Indaneti yakaputika nemifananidzo
Kutarisa chaizvo! Top 11 inogadziriswa naStephen King
"Titanic" Makore makumi maviri: Kate, Leo nevamwe vatambi panguva iyoyo uye zvino
Nyeredzi gumi nemashanu dzakazova amai vasati vava nemakore makumi maviri nemaviri
10+ nyeredzi, dzine mahedheni ezvepachivande dzakashamiswa paWebhu, uye dzinovanyadzisa pasi rose!
25 michina isina kutenderwa yausingafaniri kudya
Scarlett Johansson naRomanin Doriak vakatanga kutanga kurambana
Nzira yekugadzirira sei kutengesa kubva kune nyuchi?
Vana modular furniture
Madzimai anodonha mazango
Shish kebab kubva kuchiropa chechipfuwo
Ngarava yakasvibiswa kune imwe nyika inogona kukuvadza pasi pano ichakurumidza kuenda kuMaris!
Pie ne kiwi
Mushonga weputi unogunzva
Salmon yakadirwa muhari pamba
Mascarpone kubva mumucheka wakasviba pamusha
Female jet orgasm
Ita tafura yekugadzira negirazi
Mafuta anosvuta kwenguva refu yekugara kwezhizha
Remedzisiro yehuyo yevana
Kubata nemapfudzi akazaruka
Mangani emakoriori ari mu borscht dish?